लगनपछिको पोते | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ मंसिर ६, शनिबार ०२:५२ गते
अनुवाद ः टीकाराम रेग्मी
‘जब म त्यो रात घर पुगेँ, मेरी श्रीमतीले खाना पस्कने बित्तिकै मैले उनको हात समातेर भनेँ, ‘मैले तिमीलाई केही भन्नुछ ।’ उनी चुपचाप बसेर खाइन् मात्र । फेरि मैले उनका आँखामा दुःख देखेँ ।
अकस्मात् मलाई कसरी फेरि मुख खोलूँजस्तो भयो, तर मैले सोचिरहेको कुरा उनलाई भन्नैपथ्र्यो । ‘म सम्बन्धविच्छेद चाहन्छु ।’ मैले विषयलाई बिस्तारै बढाएँ । मेरा शब्दले उनी दुःखी देखिइनन्, बरू उनले नम्रतापूर्वक सोधिन्, ‘किन ?’
मैैले उनको प्रश्नलाई टार्न खोजेँ । यसले उनलाई रिसाउने बनायो । उनले काँटा हु¥र्याइन् र मलाई गाली गरिन्, ‘तिमी मान्छे होइनौ ।’ त्यो रात हामी बोलेनौँ । तिनी रूँदै थिइन् । मलाई थाहा थियो, तिनी खोतल्दै थिइन्– हाम्रो वैवाहिक जीवनमा के भएको थियो ! तर, मैले उनलाई सन्तोषजनक जवाफ दिन मुस्किलले सक्थेँ । मेरो मुटु जेनलाई दिएकाले उनले गुमाएकी थिइन् । मैले उनलाई दयाबाहेक पटक्कै माया गर्दैनथेँ ।
गहिरो दुःखको भावनासहित मैले त्यागपत्रको खेस्रा तयार गरेँ, जसमा मैले यो पनि उल्लेख गरेँ– उनले हाम्रो घर, कार र हाम्रो कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर पनि पाउनेछिन् । उनले यसलाई घृणाले हेरिन् र टुक्राटुक्रा पारेर च्यातिदिइन् । मसँग आफ्ना दस वर्ष बिताएकी महिला अपरिचितजस्तै भएकी थिइन् । मैले उनको समय, स्रोत र शक्तिको दुरूपयोगका लागि दुःख मानेँ तर म आफ्नो बोलीबाट पछि फर्कन सक्दैनथेँ, किनकि मैले जेनलाई आत्मैदेखि माया गर्थें । अन्त्यमा उनी मेरो अगाडि बेस्मारी रोइन्, यो त्यही थियो जुन मैले देख्न चाहेको थिएँ । उनको त्यो रूवाइ मेरा निम्ति एक खालको मुक्ति थियो । त्यो छोडपत्रको विचार, जसले मलाई हप्तौँदेखि एकखालको पीडा दिएको थियो, अहिले झन् दह्रो र स्पष्ट भयो ।
अर्को दिन, म घर धेरै अबेला आउँदा उनले टेबलमा बसेर केही लेखिरहेको देखेँ । मैले केही नखाई सोझै बिस्तरामा गएर सुतेँ र छिटै निदाएँ पनि, किनकि म जेनसँगको उत्तेजक दिनले थाकेको थिएँ । जव म ब्युँझिएँ, उनी अझै पनि टेबलमा लेख्दै थिइन् । मैले खासै चासो दिइनँ । म फनक्क फर्कें र फेरि निदाएँ ।
बिहान, उनले आफ्नो छोडपत्रका सर्तहरू प्रस्तुत गरिन्– उनले मसँग केही पनि चाहन्नथिन्, तर छोडपत्रपहिले एक महिनाको पूर्वसूचनाको याचना थियो । उनले अनुरोध गरेकी थिइन् कि त्यो एक महिनामा हामी दुवै यथासम्भव सामान्य जीवनमा झैँ नै सँगै बस्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो । उनका आकांक्षाहरु सामान्य थिएः तिनीहरुका छोरोको परीक्षा त्यही महिनामा थियो र उनले हाम्रो वैवाहिक विग्रहका कारणले छोरोलाई बाधा पु¥याउन चाहन्नथिन् ।
यो त मलाई स्वीकार्य नै थियो, तर उनको केही बढी नै आग्रह थियो । उनको अनुरोध थियो, मैले सम्झनुपर्ने थियो– हाम्रो विवाहको दिन मैले कसरी उनलाई सुहागरातको कोठामा लगेको थिएँ अनि उनले अनुरोध गरेकी थिइन्, त्यो महिनाभरि मैले उनलाई हरेक बिहान त्यसैगरी हाम्रो सुत्ने कोठाबाट बाहिर निकाल्नुपथ्र्यो । मैले सोचेँ, उनी त पागलै भइछन् । जीवनका अन्तिम दिनहरुलाई सँगै बस्न सहज बनाउन मैले उनको अमिल्दो आग्रहलाई स्वीकार गरेँ ।
मैैले मेरी पत्नीसँगको पारपाचुकेको सर्तहरुका बारेमा जेनलाई सुनाएँ । यो सुनेर उनी चर्को आवाजमा हाँसिन् र यसलाई हावादारी सोचिन् । ‘उसले पारपाचुके त गर्नै छ’, उनले तिरस्कार
गर्दैै भनिन् ।
मैले छोडपत्रको विचार खुला रुपले व्यक्त गरेपछि श्रीमतीको र मेरो शारीरिक सम्बन्ध भएको थिएन । त्यसैले, जब मैले पहिलो दिन उनलाई बाहिर लगेँ, हामी दुवै बेछाँटका भएका थियौँ । हाम्रो छोरोले पछाडिबाट ताली पिट्दै भन्यो, ‘बाबाले आमालाई काखमा लिँदै हुनुहुन्छ ।’ उसका शब्दले मलाई एक किसिमको पीडा भयो । मैले उनलाई काखमा राखेर सुत्ने कोठाबाट बस्ने कोठा र त्यसपछि ढोकासम्म, लगभग दस मिटर हिडेँ । उनले आँखा चिम्लेर बिस्तारै भनिन्, ‘हाम्रो छोडपत्रको कुरा छोरोलाई नसुनाउनोस् है ।’ मैले केही दुःखका साथ टाउको हल्लाउँदै स्वीकारेँ । मैले उनलाई ढोकाबाहिर राखेँ । उनले काममा जानका लागि बस पर्खिन् गइन्, म एक्लै गाडीमा अफिस गएँ ।
दोस्रो दिन, हामी दुवैले सजिलै अभिनय ग¥यौँ । उनी मेरो छातीमा टाँसिइन् । मैले उनको ब्लाउजको सुगन्ध लिन पाएँ । मैले आत्मसात् गरेँ कि मैले यो आइमाईलाई धेरै दिनदेखि राम्ररी हेरेको रहेनछु । मैले आत्मसात् गरेँ, उनमा जवानी त छँदै थिएन । उनको अनुहारमा राम्ररी देखिने मुजाहरु थिए र उनका रौँहरु फुल्दै थिए । हाम्रो विवाहको गणना उनीमा पाइन्थ्यो । एक मिनेट त मैले उनलाई के गरेँ भनेर आश्चर्यमा परेँ !
चौँथो दिन, जब मैले उनलाई उठाएँ, मैले एकखालको आत्मीयता फर्केको महसुस गरेँ । ‘मलाई आफ्ना दस वर्ष दिने यही आइमाई हो ।’ पाँचौँ र छैटौँ दिन मैले हाम्रो आत्मीयता बढ्दै गरेको आत्मसात् गरेँ । मैले यो कुरा जेनलाई भनिनँ । जब एक महिना बित्दै थियो, मैले उनलाई बोक्न सजिलो भएको पाएँ । सायद, हरेक दिनको अभ्यासले मलाई बलियो बनाएको होस् ।
एक बिहान उनले लगाउने लुगा रोजिन् । उनले केही कपडा लगाउन खोजिन्, तर उनलाई मिल्ने कुनै पाइनन् । त्यसपछि उनले लामो सास फेर्दै भनिन्, ‘मेरा सबै कपडाहरु ठूला भएछन् ।’ अचानक मैले महसुस गरेँ कि उनी त निकै दुब्ली भएकी रहिछन् र पो मलाई बोक्न सजिलो भएको रहेछ ! अचानक यसले मलाई च्वास्स घोच्यो । उनले त यतिविघ्न पीडा आफ्नो मुटुमा लुकाएकी रहिछन् । अर्धचेतनमै म बाहिर गएँ र उनको टाउकोमा हात राखेँ ।
त्यसैबेला हाम्रो छोरो आयो र भन्यो, ‘बुबा, आमालाई बाहिर लाने बेला भयो ।’ उसका लागि आमालाई मैले काखमा राखेर बाहिर लगेको देख्नु जीवनको एक मह¤वपूर्ण भाग भएको रहेछ । मेरी श्रीमतीले छोरोलाई नजिकै आउन इशारा गरिन् र कसेर अङ्कमाल गरिन् । म भने कतै यो अन्तिम समयमा आफ्नो दृढ निश्चय फेरिन्छ कि भनेर अर्कोतिर फर्कें । त्यसपछि मैले उनलाई सुत्ने कोठाबाट हिँड्दै बस्ने कोठा हुँदै हलकोठासम्म आफ्नो काखमा लिएँ । उनका हातले मेरो गर्धन सुस्तरी र सामान्य तरिकाले घुमाएर समाइन् । मैले उनको शरीरलाई दह्रो गरी उठाएँ । यो ठ्याक्कै हाम्रो विवाहको दिनजस्तै थियो ।
तर, उनको असाध्य हलुका तौलले मलाई दुःखी बनायो । अन्तिम दिन, जब मैले उनलाई हातमा उठाएँ, मैले मुस्किलले एक पाइला चाल्न सकेँ । छोरो स्कुल गएको थियो । मैले उनलाई कसेर उठाएँ र भने, ‘मैले हाम्रो जीवनमा आत्मीयताको अभाव भएको ख्याल गरिनँ ।’ म गाडी लिएर अफिस गएँ, कारको ढोका नै बन्द नगरी कारबाट
फदालेँ । मलाई डर थियो, ढिलो गर्दा मेरो दृढ विचारमा परिवर्तन आउन सक्थ्यो । म भ¥याङ चढेर माथि गएँ । जेनले ढोका खोली र मैले उसलाई भनेँ, ‘मलाई माफ गर जेन, मैले कुनै पनि हालतमा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहन्नँ ।’
उसले मलाई हेरी, आश्चर्य मान्दै मेरो निधार छामी । ‘के तिमीलाई ज्यरो आएको छ ?’ उसले भनी । मैले उसको हात टाउकोबाट हटाएँ । ‘जेन, म छोडपत्र गर्दिनँ । मेरो वैवाहिक जीवन त हामीले हाम्रो जीवनको अन्तरङ्ग पक्षलाई मह¤व नदिएका कारणले दिक्क लाग्दो भएको रहेछ, मायाको अभावले होइन । अहिले मैले यो महसुस गरेँ कि मैले विवाहका दिन उनलाई उठाएर घर लगेदेखि मृत्युले हामीलाई नछुट्टयाएसम्म मैले उनलाई यसैगरी उठाइरहनु पथ्र्यो ।’ जेन झल्यास्स ब्युँझेझैँ गरी । उसले मलाई चड्याम्म एक झापड लगाई अनि ड्याम्म ढोका बन्द गरी र ड्वाँ–ड्वाँ रून लागी । म तल झरेँ र गाडी चलाएँ । बाटोमा पर्ने भुइँतलाको एउटा पसलमा मेरी पत्नीका लागि फूलको एक बुकेको अर्डर गरेँ । बिक्रेता केटीले कार्डमा के लेख्ने भनेर सोधी । मैले मुस्काउँदै लेखेँ– ‘मृत्युले हामीलाई नछुट्टयाएसम्म मैले तिमीलाई हरेक बिहान बाहिर लानेछु ।’
त्यो साँझ म हातमा फूल, मुहारमा मुस्कानका साथ घर आएँ । जब म खुट्किला चढेँ, मैले मेरी पत्नीलाई बिस्तरामै मरेकी पाएँ । मेरी पत्नी महिनौँदेखि क्यान्सरसँग लडिरहेकी थिइन् ।
(मूल लेखक ः अज्ञात)